Jupp Heynckes: Barcelona Oo Uu Ka Maqan Yahay Messi Waa Si Kale. | Laacib.net
Tababare Jupp Heynckes ayaa aaminsan in Bayern Munich ay nasiib ku laheyd in Lionel Messi uusan u ciyaarin Barcelona kulankii ay FC Hollywood xalayto guul 3-0 ah ku gaartay Camp Nou.
Ciyaaryahanka reer Argentina ayaa kursiga keydka ka soo daawaday iyadoo kooxdiisa ay dhibane u noqotay Bayern Munich, iyadoo Arjen Robben, gool uu iska dhaliyay Gerard Pique iyo Thomas Muller ay keentay in kooxda Jarmalka ay labada lug ee semi-finalka ku badiso 7-0.
Inkastoo tababare Heynckes uu ku hanweynaa shaqada ay kooxdiisa qabatay, hadana waxa uu ka warqabaa kala duwanaanshaha ay keentay Messi la’aantiisa.
“Waxaan qabaa inay iska cadeyd inay kooxdeyda kulankaan soo gashay iyadoo si aad ah diirada u saareysa” ayuu tababaraha Bayern u sheegay suxufiyiinta ciyaarta ka dib.
“Waxaan ciyaarnay kubad weyn laga soo bilaabo bilowgii ciyaarta. Si kastaba, ma beenineyno in Barcelona ay tahay koox kale marka uusan Messi ciyaareynin.
“Weli waan hubaa in cidna aysan fileynin inaan labada lug ku badino 7-0. Mana dhahayo wixii aan goob joog u aheyn waxa ay soo gabagabeysay waayo. Barcelona waxaa ka maqnaa ciyaartoy badan, anagana waxaan soo bandhignay qaab ciyaareed qatar ah.”